Xulka Bari oo 3-1 kaga badiyey xulka J. Hoose, finaalahana la ciyaari doona xulka Banaadir. – Radio Daljir
Diseembar 29, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 29 – Ciyaar aad u bilan ayaa maanta ku dhex martay garoonka Mire Awaare ciyaartoyda xulalka Bari v J. Hoose. Ciyaartan oo ahayd mida aad loo sugayey, ka soo qaybgalkeeduna uu aad u sareeyey ayaa xulka Bari waxaa ay soo bandhigeen wacdaro ay adag tahay in qof aan joogin looga sheekeeyo.
Bari oo illaa hadda ah xulka loogu han weyn yahay in uu ku guulaysato koobka kubadda cagta ee gobollada Somaliya, Garowe 2010 ayaa dhinac kasta ciyaarta hogaaminayey, walow ciyaartodda J. Hoose ay sameeyeen isku day badan, ayna muujiyeen ciyaar wanaag, laakiin maanta ma ahayn maalintoodii.
Qaybtii 1-aad ee ciyaarta ayaa xulka Bari ay dhaliyeen goolkii ugu horeeyey ee ciyaarta, halka qaybtii 2-aadna ay dhaliyeen 2 gool oo kale oo ciyaarta ay ku soo khatimeen; ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 oo Bari ay guushu ku raacday.
Marka la eego farsamada iyo ciyaar wanaaga ay soo bandhigeen xulka Bari gebio ahaan ciyaaruhu inta ay socdeen ayaa ay adag tahay in si sahal ah looga badiyo. Waa ciyaartoy si aad ah isugu xiran, lehna ciyaar kooxeed aad u bilan oo aan koox kale muujin.
Xulka J. Hoose ayaa la oran karaa waxaa ku dhacay ciyaar guur la garan waayey halka ay ka baxeen.
Waxaa Sabtida oo bishu ay tahay 31-ka December dhici doonta ciyaarta finaalaha ah oo dhex mari doonta xulalka Bari v Banaadir.